Horudhaca kulanka ay kooxda Barcelona caawa booqanayso Slavia Prague ee Champions League – Gool FM
(Prague) 23 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa kulan ka tirsan Champions League waxa ay caawa booqanaysaa naadiga reer Czech ee Slavia Prague.
Kooxda reer Spain ee Barcelona ayaa doonaysa inay caawa guul gaarto si ay hoggaanka Guruubkeeda F u qabato, inkastoo ay la wadaagi karaan hoggaanka kooxda Borussia Dortmund haddii ay dhankeeda adkaato.
Kooxda reer Czech ka socota ee Slavia Prague ayaana wax guul ah gaarin illaa iyo haatan waxaana Guruubkan F ay ka hoggaaminaysaa halka ugu hooseysa iyadoo leh kaliya hal dhibic.
Garsooraha: Robert Madden (Scotland)
Garoonka: Sinobo Stadium
Kooxda kubadda cagta Slavia Prague ayaa haysata saf caafimaad qaba iyadoo aysan jirin xiddigo ka dhaawacan ama ka ganaaxan kulanka ay caawa soo dhoweynayanaan naadiga Barcelona.
Dhinaca kale kaddib markii dib loo dhigay kulankii ay la la haayeen Real Madrid ee El Clasico, kooxda Barcelona ayaa safkeedii ugu xooggaa kala hortagi karta kulanka caawa naadiga Slavia Prague.
Lionel Messi, Luis Suarez iyo Antoine Griezmann ayaa dhammaantood shabaqa soo taabtay oo goolal dhaliyey hal kulan markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan, waxaan la filayaa inay ka soo muuqdaan kulanka caawa.
Barcelona ma qabto dhaawacyo ay ka walwasho marka laga soo tago Samuel Umtiti oo aan halis la galinaynin oo dhawaan dhaawac ka soo kacay, Carles Alena iyo Carles Perez oo aan kooxda la safrin & Sergi Roberto iyo Junior Firpo oo shaki la galinayo.
Ousmane Dembele, Ronald Araujo iyo Gerard Pique oo dhammaantood seegay kulankii ay Sabtidii 3-0 uga soo adkaadeen naadihga Eibar, maadaama ay ganaax ku maqnaayeen, laakiin haatan kulanka caawa waa u diyaar oo waa kuwo la heli karo.
>- Waxaa in ka yar 2.5 goolal ah laga dhaliyay kooxda Slavia Prague siddeedii kulan ee ugu dambeysay oo ay ciyaartay UEFA Champions League.
>- Kooxda Barcelona ayaan la garaacin 13 ka mid ah 14-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartanka UEFA Champions League.